नबिल बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने ‘नबिल क्याश मेशीन’ शुरु, क्रेडिट कार्ड भुक्तानी पनि गर्न सकिने « Bizkhabar Online
नबिल बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने ‘नबिल क्याश मेशीन’ शुरु, क्रेडिट कार्ड भुक्तानी पनि गर्न सकिने
19 August, 2021 11:34 am
काठमाडौँ । आफ्ना ग्राहकहरुको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै नबिल बैंकले ‘नबिल क्यास मेशिन’ जारी गरेको छ । आधुनिक बैंकिङ्ग युगको शुरुवात गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदै यस नबिल क्याश मेशीनले ग्राहकहरुलाई एटीएममार्फत रकम झिक्ने मात्र नभई रकम जम्मा पनि गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ ।
यस प्रविधि नबिल बैंकले सुरुवातमा नबिल बैंकको तीनधारा शाखा र पुल्चोक शाखाबाट सुरु गरेको छ । अब ग्राहकहरुले मेशिनमा रु. १०००/५००/१०० को नेपाली रुपैया जम्मा गर्न सक्ने छन् भने एक पटकमा रु. ९९,९०० जम्मा गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
साथै यस मार्फत नबिलको कुनै पनि बचत र चाल्ती खातामा जम्मा गर्न सक्ने छन् । साथै यसमार्फत ग्राहकहरुले आफ्नो क्रेडिट कार्ड भुक्तानी पनि गर्न सक्ने छन् ।
आफ्नो देशभर १३५ वटा शाखा कार्यलयहरु, १८४ एटिएम र १५०० भन्दा धेरै नबिल रेमिट एजेन्टहरु सहित विभिन्न देशमा रहेका एजेन्टहरुको बृहत सञ्जालमार्फत निरन्तर गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गरिसकेको छ । एक उच्च प्रशिक्षित समुह र मजबुत र सुरक्षित बैंकिङ्ग प्रणालीको साथ ३७ बर्ष बैंकिङ्ग अनुभवको साथ, बैंकको ग्राहकहरुलाई मुल्य अभिवृद्धि गर्न उच्चसेवा वितरणको लागी लक्षित छ ।